Inkampani yethu -Shanghai Yangkai Electronics Co, Ltd.
Ulawulo lwe-IR kude
Ukulawula kude kude nelizwi
Ulawulo lwe-Android TV BOX kude
Ulawulo lwe-Wi-Fi kude
Ulawulo Lonke Lwemitha
Ulawulo lwe-AC Remote
Inkampani yaseShanghai Yangkai yezoMbane
Inkampani i-Shanghai Yangkai Electronics ngumenzi okhethekileyo ekuphandeni, ekuyileni nasekuveliseni zonke iintlobo zolawulo olukude. Inkampani yafunyanwa kwi-2014 kwaye ibekwe eJing Isithili saseShanghai, yenye yezona ndawo ziphucukileyo e China. Asenzi kuphela ishishini le-ODM, imfuno ye-OEM yamkelekile.
Sinokubonelela ngoluhlu olupheleleyo lweemveliso, ulawulo olukude, ulawulo olukude kunye ne-OEM yokulawula okukude ngeenkcukacha, iimveliso zinolawulo lwe-infrared remote, i-blue-izinyo yokulawula kude, i-Wi-Fi yokulawula kude kunye nokulawula kude kude ne-air conditioner .
Inkampani yethu inemigca yemveliso engaphezulu kwama-20. Yonke imigca exhobele emazinyweni. Izixhobo zibandakanya umatshini wokubekwa ngokuzenzekelayo, umatshini wenaliti ozenzekelayo, umatshini otshangatshangiswayo, imveliso ekhethekileyo kunye nezixhobo zokuhlola, isixhobo sokulinganisa esisezantsi, umatshini ophakamileyo kunye nobushushu obuphantsi, isixhobo sokujonga i-X-ray, umatshini okhethiweyo we-soldering, iqondo lobushushu kunye nokukhanya komswakama umatshini wokuvavanya, umhlalutyi wesibonisi, njl njl.
Sinamandla emveliso kwaye sivelisa ngaphezu kwe-10,000 yeemodeli. I-R & D ezimeleyo kunye nezinto ezintsha eziqhubekayo zisenza ukuba siqhubeke. Kule minyaka idlulileyo siye isicelo amalungelo awodwa omenzi wechiza kuquka patent lokuyila, patent imodeli eluncedo kunye nenkangeleko patent. Qho ngonyaka sithumela iiseti zemizobo yokulawula kude kwi-EU, eMntla Melika, eMzantsi Melika, e-Australia nase Mzantsi mpuma we-Asia. Kuxhomekeke kulawulo olusemgangathweni olungqongqo, ubugcisa, ukuphuculwa kokusebenza, inkonzo ebalaseleyo, sijolise ekubeni ngomnye wabadlali abaphambili kushishino lolawulo olukude kunye nokwenza ixabiso eliphezulu kubo bonke abathengi bethu.
Ukongeza ekulinganiseni impumelelo yethu ngexabiso lezorhwebo, sijonga ngakumbi uxanduva kwezentlalo emagxeni ethu. Njengabemi beshishini, sihlala sisebenzisa uxanduva lwethu, sizama ukwakha uluntu olungcono kwaye sikhusela imeko yendalo evisisanayo.
Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ukuba unayo nayiphi na imibuzo.
Enkosi kakhulu ngenkathalo yakho kwaye ndininqwenelela ubomi obonwabisayo.
Kwitekhnoloji okanye emva kwentengiso:
Idilesi:Igumbi 3798, iBhlokhi 31, No.86, XiNan Rd., LvXiang Town, District Jinshan, Shanghai